Sahannada la bixiyo ma khiyaamo baa? | Ebuno
Sahannada la bixiyo ma shaqeeyaan?
Rumayso ama ha rumaysan, sahannada la bixiyo ayaa runtii shaqeeya oo waxaad ku samayn kartaa xoogaa lacag dheeraad ah. Dhab ahaan, maahan fikradda aad u kooban ee sahanno la bixin karo oo ka dhigi kara khiyaamo ama maahan laakiin websaydhka ayaa wax ka qabta. Kuwani waa shirkado doonaya inay jawaabo u helaan su'aalaha kala duwan ee khuseeya wax soo saarkooda si ay u horumariyaan oo ay ugu beddelaan degel sida Ebuno ah inuu adeegsade uga jawaabo ra'yi dhiibashada ra'yigooda, shirkaddu waxay ku bixisaa lacag iyo wixii la mid ah. waxaan ku siin karnaa adiga isticmaale ahaan qayb ka mid ah abaalmarinta. Dabcan, waxaa jira dhowr shirkadood oo la mid ah oo aan daacad ka ahayn adeegsadayaashooda isla markaana aan bixin lacagaha la bixitaankooda ka dibna waxay ku abuuri kartaa welwel dadka inaysan rabin inay sameeyaan sahanno lacag lagu bixiyo internetka marka hal shirkad ay tahay khiyaamo.
Tilmaamaha si looga fogaado goobaha khayaanada
Waxaa jira qawaaniin yar oo suulka ah oo la raacayo si aan ugu dhammaanin bogga sahan bixinta ee aan bixin
Ha bixin xubinnimada
Goobaha kaaga baahan inaad bixiso si aad uga qayb gasho sahanku waxay noqon karaan kuwo khatar ah. Waa wax aan caadi ahayn in degel daabacda lacag lagu sameeyo sahanno laga qaado lacag ay ku biirto. Shirkadaha sida Ebuno sidoo kale waa la siiyaa lacag marka isticmaalehu uu buuxiyo sahan isla markaana kaqeyb geliyo dadka isticmaala si ay u sameeyaan sahanno badan ayaa si aad ah uga faa'iido badan lacag bixinta kaliya in ay isdiiwaangeliyaan. Dabcan, maahan dhammaan boggaga internetka ee ka qaada lacagta xubinnimada inay u baahdaan khiyaano, laakiin ku dhowaad dhammaan bogagga waaweyn waa u xor inay isdiiwaangaliyaan oo ay xubin ka noqdaan.
Lacag bixinta xad dhaafka ah
Websaydhada sheeganaya in aad kasban karto 50 karoon, 100 karoon ama xitaa ka badan oo loogu talagalay baaritaannada gaagaaban waxay u badan tahay khiyaano. Shirkad sahamin ah ma awoodo inay ku bixiso intaas in yar sahamin yar maadaama aysan ka agdhaweyn inta ugu badan ee jawaabta laga bixiyo. Tani waa khiyaamo ay adeegsadayaashu ugu maleynayaan inay heleen hab fudud oo ay ku helaan "taajir". Waxay ku mashquuliyaan isticmaalaha inay qaataan 10-15 sahan, laakiin mar haddii ay tahay inay lacagtooda kala baxaan, suurtagal maahan. Xusuusnow inaad hubiso inaad ku heshay abaalmarin macquul ah cilmi baarista aad sameyso. Dabcan, waxaa sidoo kale jira sahanno dhab ah oo bixin kara si aad u wanaagsan (illaa 40 karoon 10 daqiiqo).
Baadhitaanada badankood ee runta bixiya waxay leeyihiin qaddar yar oo abaalmarin ah iyo si aad ugu qalanto waxaad u baahan tahay inaad iswaafajiso shuruudaha sahanka. On Ebuno waxaad ku buuxin kartaa dhowr su'aalood oo muuqaal ah si nidaamku si otomaatig ah kuugula jaanqaado sahannada aad u qalmi karto.
Had iyo jeer fiiri waxa macquul ah oo aan ahayn. Haddii aad aragto qaybo ka mid ah sida ay u shaqeyso oo aan u muuqan kuwo macquul ah, sida lacag-bixinno xad-dhaaf ah, ka fogow! Had iyo jeer noqo mid dhaliil badan oo taxaddar leh, laakiin marwalba way u qalantaa isku day.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani kaa caawinayo inaad fahanto sida loo kala saaro bog been abuur ah iyo mid dhab ah. Dabcan, had iyo jeer ma sahlana, laakiin badanaa waxaa jira qaybo kaa caawin kara inaad go'aamiso kalsoonida.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka akhriso sahannada la bixiyay, waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah boggayaga hore!